Zava-mahadomelina any Amerika: statistika be loatra sy matavy loatra 2021 - News | Desambra 2021
Zava-Mahadomelina Vs. Namana Lalao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Mpanao Gazety Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Ny Fizahana Fialam-Boly Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Wellness Vaovao, Wellness Orinasa, Vaovao Orinasa
Tena >> News >> Antontan'isa matavy loatra sy matavy loatra 2021
Antontan'isa matavy loatra sy matavy loatra 2021
Inona no atao hoe matavy loatra? | Manao ahoana ny haben'ny matavy loatra? | Valan'aretina ateraky ny hatavezana tafahoatra | Zava-matavy ao Amerika | Antontan'isa momba ny fiterahana amin'ny lahy sy ny vavy | Antontan'isa momba ny fiterahana isaky ny taona | Ny fiterahana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny | Ny vidin'ny hatavezina | Antony, fisorohana ary fitsaboana | FAQ | Research
Ny fiterahana dia aretina izay miavaka amin'ny fananana tavy amin'ny vatana be loatra, izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana sy fahasarotana. Ny fahalalana bebe kokoa momba ny hatavezina dia dingana voalohany manampy amin'ny fitantanana ny toe-piainana sy fiainana fiainana salama kokoa. Andao hojerentsika ny antontan'isa sasany momba ny hatavezina, ny fomba fitsaboana ny hatavezina, ary ny fomba hanampiana azy hisorohana izany.
Inona no atao hoe matavy loatra?
Ny fiterahana dia aretina izay mitranga rehefa misy olona matavy be loatra amin'ny vatana. Ny fananana tavy amin'ny vatana be loatra dia mety hampiakatra ny risika hahazo olana ara-pahasalamana fanampiny, ary mety hiteraka olana ara-pahasalamana manokana.
Ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana dia afaka mamantatra ny hatavezina mifototra amin'ny vatana index index (BMI), ny refin'ny refin'ny andilana ary ny soritr'aretina hafa. Ny antony BMI amin'ny haavon'ny olona, ​​ny lanjan'ny vatana, ny sokajin-taona ary ny firaisana ara-nofo. Ny BMI 30 na mihoatra dia matetika dia manondro matavy loatra. Ankoatr'izay, ny refin'ny valahana mihoatra ny 35 santimetatra ho an'ny vehivavy ary 40 santimetatra ho an'ny lehilahy dia mety hanondro koa ny hatavezina. Ankoatr'izay, ireto misy fambara mahazatra momba ny hatavezina:
sasatry ny manompo an'i
Fanaintainana iraisana na lamosina
Fiheveran-tena ambany / fahatokisan-tena ambany
Ny fitsaboana ny hatavezina dia matetika mitaky fanatanjahan-tena, fahazarana misakafo vaovao, famenon-tsakafo, fanafody ary amin'ny tranga sasany, fandidiana.
Manao ahoana ny haben'ny matavy loatra?
Amin'ny salan'isa, iray amin'ny isaky ny olon-dehibe telo no matavy loatra, izay manodidina ny 36% amin'ny mponina. (Harvard, 2020)
Ny fihanaky ny taonan'ny olona matavy loatra tamin'ny taona 2017-18 dia 42,4%. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2020)
Amin'ny 2030, tombanana ho 20% amin'ny mponina eran-tany no ho matavy. (Ivotoeram-pirenena ho an'ny fampahalalana momba ny biotechnology, 2016)
Manodidina ny 18,5% ny zaza 2 ka hatramin'ny 19 taona no heverina ho matavy loatra any Etazonia. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2019)
Valan'aretina matavy loatra: Firy ny olona matavy be eto amin'izao tontolo izao?
Ny matavy loatra dia tsy misy fiatraikany amin'ny olona any Etazonia Ny vahoaka any amin'ny firenena maro dia miaina ny hatavezina, ary lasa valanaretina eran-tany.
Manodidina ny 500 tapitrisa eo ho eo ny olon-dehibe matavy be.
Raha tsy miakanjo izy dia olon-dehibe 1 lavitrisa eo ho eo no ho matavy amin'ny 2030.
Maherin'ny 25% ny olon-dehibe UK dia matavy loatra.
Efatra amby enimpolo isan-jaton'ny vehivavy ao Arabia Saodita no matavy be.
Zava-matavy ao Amerika
1 amin'ny isaky ny olon-dehibe amerikana 3 dia matavy loatra. (Harvard, 2020)
Ny vehivavy mainty tsy Hispanika dia miaina ny taha matavy indrindra any Amerika amin'ny 59%. (Harvard, 2020)
Ny tahan'ny matavy dia avo kokoa ho an'ny mponina mainty Hispanika, meksikanina, ary ny mainty tsy Hispanika raha oharina amin'ny an'ny Kaokazy. (Harvard, 2020)
Ny atsimo sy ny afovoany andrefana dia manana fihanaky ny matavy indrindra. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2019)
Ny fanjakana sy ny faritany amerikana rehetra dia manana taha-matavy farafaharatsiny 20%. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2019)
Antontan'isa momba ny fiterahana amin'ny lahy sy ny vavy
Amin'ny ankapobeny, ny tahan'ny matavy loatra ho an'ny olon-dehibe dia avo kokoa ho an'ny vehivavy. (Ivon-toerana nasionaly momba ny statistikan'ny fahasalamana, 2013-2014)
Vehivavy afrikanina-amerikana 4 amin'ny 5 no matavy loatra na matavy loatra. (Biraon'ny fahasalamana vitsy an'isa , 2018)
Vehivavy Latina na Hispanika 3 amin'ny 4 no matavy loatra na matavy loatra. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2018)
Ny tahan'ny matavy loatra ho an'ny lehilahy dia avo indrindra ho an'ny vondrona antonony. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2020)
Ny tahan'ny matavy loatra ho an'ny vehivavy fotsy tsy Hispanika, Aziatika tsy Hispanika, ary Hispanika dia avo indrindra ho an'ny vondrona manana fidiram-bola ambany indrindra. (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2020)
Antontan'isa momba ny fiterahana isaky ny taona
Any Etazonia, ny hatavezina dia be mpampiasa kokoa noho ny tanora. (Ivon-toerana nasionaly momba ny statistikan'ny fahasalamana, 2015-2016)
Ny hatavezina amin'ny fahazazana dia miakatra manerantany, miaraka amin'ny zaza mavesatra sy matavy loatra 43 tapitrisa latsaky ny 5 taona (Harvard, 2010).
Ankizy 1 amin'ny 6 taona 2 ka hatramin'ny 19 no matavy loatra (Fanadihadiana momba ny fahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo nasionaly, 2013-2014).
Ny fiterahana dia be loatra eo amin'ny zaza 6 ka hatramin'ny 19 taona noho ny an'ny zaza 2 ka hatramin'ny 5 taona. (Ivon-toerana nasionaly momba ny statistikan'ny fahasalamana, 2015-2016)
Ny fiterahana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny
Ny fiterahana dia mety hanakantsakana ny kalitaon'ny olona iray ary hisy vokadratsin'ny fahasalamana lehibe toy ny fihanaky aretim-po, kapoka, diabeta karazana 2, homamiadana, kolesterola avo, tosidra ambony, olana amin'ny fiaraha-miasa ary fatoriana.
Misy 2,8 tapitrisa mahery ny fijanonan'ny hopitaly isan-taona any Etazonia, izay antony mahatonga ny hatavezina na antony iray manampy. (Tetikasa momba ny vidin'ny fitsaboana sy ny fampiasana ara-pahasalamana, 2012)
Manodidina ny 300000 ny olona matin'ny hatavezina any Amerika isan-taona. (Ivotoeram-pirenena ho an'ny fampahalalana momba ny bioteknolojia, 2004)
Mifandraika: Zavatra 9 azonao atao hisorohana ny homamiadana
Ny vidin'ny hatavezina
Ny vidin'ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny hatavezina dia $ 150 miliara isan-taona any Etazonia (Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 2020)
Ny olona matavy dia mandany $ 1.500 eo ho eo amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana ho an'ny tenany noho ny olona lanja salama. (Tetikasa momba ny vidin'ny fitsaboana sy ny fampiasana ara-pahasalamana, 2012)
Ny vidin'ny fitsaboana mifandraika amin'ny fiterahana dia mety hiakatra amin'ny $ 48 ka hatramin'ny $ 66 miliara isan-taona amin'ny 2030. (Harvard, 2020)
Ny antony mahatonga ny hatavezina
Ny fiterahana dia heverina fa vokatry ny fitambaran'ireo antony ara-batana, ara-tsaina, tontolo iainana ary / na mety hampidi-doza ny fototarazo. Ny aretina sasany sy ny toe-pahasalamana dia mety miteraka na manampy amin'ny fiterahana koa.
Ireto misy sasany amin'ireo antony lehibe mahatonga ny hatavezina:
Safidy fomba fiaina , ao anatin'izany mihinana sakafo tsy mahasalama, voahodina ary nendasina; tsy fahavitrihana ara-batana; ary ny fifohana sigara dia mety hiteraka hatavezina.
Tantaram-pianakaviana matavy loatra mety hidika hoe olona mitahiry tavy amin'ny fomba hafa ary manangona miadana ny sakafo. Ireo antony roa ireo dia mety hampisy hatavezina.
Ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena dia mamolavola ny fahazarantsika ara-pahasalamana. Ohatra, ny ankizy tsy ampianarina mihinana ara-pahasalamana na manao fanatanjahan-tena dia mety ho lasa matavy loatra. Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny fananana kely karama dia afaka mandray anjara bebe kokoa amin'ny hatavezina satria tsy fahampian'ny loharanon-karena hividianana sakafo mahasalama.
Ny toe-pahasalamanao toy ny polycystic ovary syndrome na ny aretin'i Cushing, dia afaka mandray anjara amin'ny fitomboan'ny lanja sy ny hatavezina. Jereo ity lisitry ny fanafody izay miteraka fitomboan'ny lanja ity .
Fisorohana ny fiterahana
Ny fisorohana ny hatavezina dia mitambatra fanovana maro, toy ny:
Mihinana sakafo mahasalama
Mampihena ny adin-tsaina
Mametra ny ora amin'ny efijery
Fanalavirana ireo sakafo voahodina
Manjifa fibra betsaka
Manana fanohanana matanjaka sy vondrona sosialy
Ny fisorohana ny hatavezina dia olana sarotra, hoy i Taylor Graber, MD, tompon'ny ASAP IV . Ny fihinanana sakafo voalanjalanja tsara misy voankazo vaovao, legioma, hena / trondro / akoho amam-borona ambany tavy, ampiarahina amin'ny fampihetseham-po be ho an'ny kardiojika hitazomana sakafo tsy mitongilana kaloria na tsy misy kaloria, dia tsara indrindra.
Mifandraika: Afaka manampy amin'ny fihenan-danja ve ny vinaingitra paoma?
Dokotera maro toa an'i Dr. Graber no miara-miasa amin'ny marary hanampiana amin'ny ady amin'ny hatavezina, ary misy fikambanana sy andrim-panjakana tsy tambo isaina mifantoka amin'ny fisorohana, fitsaboana ary fanentanana momba ny hatavezina. Ireto misy fikambanana sy andrim-panjakana sasantsasany mifantoka amin'ny fiterahana sy ny fisorohana ny lanjany be loatra:
Afaka ataontsika! natomboka a fandaharam-pianarana fanabeazana ara-pahasalamana hampianarana ny ankizy 2 ka hatramin'ny 5 taona ny amin'ny fanaovana safidy tsara.
Federasiona manerantany momba ny fiterahana niorina Andro manerantany ho an'ny fiterahana tamin'ny 2015 mba hahafantarana ireo fikambanana manerantany ary hampitombo ny fahatsiarovan-tena momba ny krizy matavy loatra manerantany.
Ny Ivon-toerana nasionaly momba ny kalitaon'ny fahasalamana ho an'ny ankizy nahatratra 149.000 hatramin'ny olona 232000 miaraka amin'ny fandefasan-kafatra eo an-toerana momba ny lanjany mahasalama sy voaofana mihoatra ny Mpitondra 350 eo an-toerana hiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka hisorohana ny hatavezina ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Ny fiaraha-mientan'ny hetsika fiterahanampiaro ny mihoatra ny Olona 70 000 miaraka amin'ny matavy loatra hiadiana amin'ny fitongilanana lanja sy fanavakavahana.
Fitsaboana matavy loatra
Ny fitsaboana ny hatavezina dia mety hisy iray na maromaro amin'ireto:
Fiovan'ny fomba fiainana
Fandaharana fitantanana lanja
Rafitra balaonina gastric
Ireto misy fanafody malaza momba ny hatavezina fanta-daza sy mahazatra:
Belviq (na izany aza, Nesorina i Belviq avy amin'ny tsenan'i Etazonia tamin'ny Febroary 2020)
Mifandraika: Azo antoka ve ny phentermine amin'ny fihenan-danja?
SASANY fanafody vaovao , toy ny mpiasan'ny rafi-pitabatabana afovoany sy ny mpitsabo manokana ny tsinainy, dia mety hanampy amin'ny fihenan-danja. Ireo fanafody ireo dia ao anatin'ny fitsapana ara-pitsaboana ankehitriny.
Ny fomba tsara indrindra hianarana bebe kokoa momba ny fitsaboana matavy loatra sy ny fanafody dia ny miresaka amin'ny mpitsabo anao. Izy dia afaka mamolavola drafitra fitsaboana ho anao hanampy anao hahatratra lanja mahasalama.
Raiso ny karatra fihenam-bidy tokana an'ny SingleCare
Fanontaniana sy valiny momba ny fiterahana
Fa maninona no lasa be loatra ny matavy loatra?
Betsaka ny antony mahatonga ny hatavezina tafahoatra. Mihinana sakafo voadio sy matavy be dia be ny olona, ​​mihinana ampahany betsaka kokoa izy ireo, tsy dia manao fanatanjahan-tena loatra ary mandany fotoana bebe kokoa eo anoloan'ny efijery. Ireo no sasany amin'ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny matavy loatra eran-tany.
Firy isan-jaton'ny Amerikanina no matavy?
Saika 40% ny olon-dehibe amerikanina 20 taona no ho miakatra no matavy be. 71,6% -n'ny olon-dehibe 20 taona no ho miakatra no matavy loatra, ao anatin'izany ny hatavezina. ( Fanadihadiana momba ny fahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo nasionaly , 2017-2018; Sekolin'ny fahasalamam-bahoaka Harvard , 2020).
Inona ireo fanjakana misy mponina matavy indrindra?
Ireo fanjakana ireo no manana ny fatra matavy indrindra, miaraka amin'ny taha 35%:
Inona ny tahan'ny matavy loatra ankehitriny?
Ny Centres for Disease Control (CDC) dia manombana fa manodidina ny 40% ny olon-dehibe any Etazonia no matavy loatra.
Miteraka aretina hafa ve ny hatavezina?
Ny fiterahana dia mampitombo ny risika amin'ny famoahana aretina na aretina hafa toy ny:
Aretim-po vokatry ny fo
Mifandraika: Miverina amin'ny prediabetes amin'ny sakafo
Mety hiteraka tavy be ve ny aretina sasany?
Ny aretina sasany dia mety miteraka na miteraka tavy:
Syndrome ovary polycystic (PCOS)
Firy ny olona matin'ny hatavezina?
Mampalahelo fa mety hiteraka fahafatesan'ny olona aloha loatra ny hatavezina, ary na dia sarotra aza ny mahafantatra marina hoe firy ny olona matin'ny hatavezina, ny sasany fampianarana Tombanana ho 300 000 no matin'ny hatavezina isan-taona any Etazonia.
Fikarohana momba ny fiterahana
Loharano fisorohana ny matavy loatra , Harvard
Epidemian'ny fiterahana: fironana amerikana matavy loatra , Harvard
Statin'ny fiterahana , University of Florida
Fironana matavy loatra sy matavy loatra , Ivotoerana Nasionalin'ny diabeta sy ny fivalanana ary ny voa (NIDDK)
Fihanaky ny obesity eo amin'ny olon-dehibe sy ny tanora: Etazonia, 2015-2016 , Ivotoeram-pirenena momba ny statistikan'ny fahasalamana (NCHS)
Famaritana ny matavy loatra sy ny lanjany be loatra , Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC)
Zava-misy matavy loatra , CDC
Angon-drakitra sy statistikan'ny fiterahana , CDC
Ny lanja sy ny hatavezina , Biraon'ny fahasalaman'ny vehivavy
Obesity sy Amerikanina Afrikanina , Birao amerikanina misahana ny fahasalamana sy ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana vitsy an'isa
Ny hatavezina amin'ny zatovo , Cedars-Sinay
Fisorohana ny hatavezin'ny zaza , Ivotoerana nasionaly, havokavoka ary rà (NHLBI)
Fitsaboana amin'izao fotoana izao noho ny hatavezina , Fitsaboana klinika diarin'ny Royal College of Physicians
Ny tahiry SingleCare dia misy ao amin'ny Hy-Vee
Maso mavokely vs. allergy: Ampitahao ny karazana maso mavokely
inona ny miralax ary manao ahoana ny asany
inona no mpitsabo hozatra tsara indrindra amin'ny fanaintainan'ny vozona
firy mg ny ibuprofen no tokony ho raisiko
ny fomba hitazonana ny hatsiaka fanafody mandritra ny dia